Omunye uthi eziyingozi kunazo zonke kulelo nalelo wesifazane - kuyinto lesizalo ukopha. nezimbangela zayo zingase zihluke. Abantu abaningi bacabanga ukuthi kwenzeka kuphela phakathi nenkathi yokukhulelwa. Ngokuvamile eqenjini engozini abesifazane oneminyaka engu-35 kuya kwezingu-50, ngakho bonke abantu bobulili fair kudingeka wazi indlela ukuyeka lesizalo ukopha.
Lesizalo ukopha kubhekwa uma ayixhumene nama izifo organic, ukukhulelwa neziyaluyalu letindzala.
Yini kubhekwa kokuya esikhathini okuvamile? Isikhathi umjikelezo kuhluka ezingu-21 kuya 35, ukulahlekelwa igazi kumele singeqi 80 ml, isikhathi akufanele kube izinsuku ezingaphezu kweziyisikhombisa. Ngakho-ke, uma kukhona eside zokubona, olukhulu ngokwengeziwe, uma kwenzeka phakathi nezikhathi ke ukuthi nginesifo "lesizalo ukopha." Uma kungenziwa lutho, kungase kuvele , yensimbi ukuntula igazi.
I stop lesizalo ukopha? Ungasebenzisa imithi yesintu. ukwelashwa okuphumelelayo kubalulekile ayichaze imbangela yalesi sifo. Ngezinye izikhathi kunzima ukwenza. Ngokuvamile lokhu zokugula kwenzeka uma lesizalo myoma. Ikakhulukazi uma itholakala ngaphakathi emzimbeni. Kulokhu, kuphela ukusiza ngokushesha kokungenela, ezinye izinhlobo zokwelapha engenamsebenzi. Enye imbangela lesizalo ukopha kungaba polyp endometrial. Abakwazi avele ngasiphi yobudala. ukususwa yabo akakubangeli zabasebenzi. Ingozi lesizalo ukopha ngesikhathi sokukhulelwa, njengoba lokhu kungasho ukuthi ukuphuphuma kwesisu noma nakakhulu - ukukhula komntwana ethunjini. Kulo mBhalo, uma ungenawo afeze ukuhlinzwa esiphuthumayo, owesifazane angase afe. isimo esinjalo kungenzeka kubangelwa emdlavuzeni wesibeletho wesibeletho.
Ngakho, ukuze bazi ukuthi ukuyeka lesizalo ukopha, kubalulekile ukuze kutholakale imbangela. Ukuze wenze lokhu, kudingeka babonane nodokotela-wezifo zabesifazane. Ngeke uhlole bese uthatha smear ku ngegciwane. Okokuqala kubalulekile ukucacisa khona noma ukungabi khona umdlavuza. Kubalulekile futhi ukuba ukuqhuba ultrasound. Lokhu kuzokwenza ukucacisa ukushuba we endometrium futhi khona izimila. Ngemva luhlolo ephelele, lo dokotela ozonquma ukuthi ukuyeka lesizalo ukopha. Kubalulekile ukuhlola ngendlela efanele. Lokho kuxhomeke kuye ngenhloso ukwelashwa kanye ezakheke: imithi noma op. Ngokuvamile ezisetshenziswa i-hormone izidakamizwa. Asiza ukuhlela umsebenzi emzimbeni.
Kanjani ukuyeka lesizalo ukopha ekhaya? Sula ikhasi orange, lwanele ukuthatha izithelo eziyisikhombisa. Kulahleni epanini bese uthele amalitha kwesigamu amanzi. Khona-ke wagqoka umlilo omncane futhi upheke kuze ketshezi asihlali isigamu-litre. Ukuze umhluzi, ungakwazi ukwengeza kwengcosana kashukela ukunambitha. Thatha kokuthola izimali ezidingekayo ukuze kane ngosuku ithisipuni elilodwa.
Kodwa ngaphambi unquma ukusebenzisa imithi yendabuko, kahle ukucabanga. Kungcono uxhumane nodokotela wakho, ikakhulukazi uma owesifazane oseminyakeni yokuzala futhi sebeke baya ocansini. ukhulela ethunjini ayikwazi iphathwa ngokuzimela.
Ukwelashwa rhinitis ekhaya.
Beetle Kuzka: incazelo Development, isivikelo isinambuzane